Translations < Myanmar (Burmese) < Network Admin < GlotPress — WordPress
Translation of Network Admin: Myanmar (Burmese)
Filter ↓ • Sort ↓ • All (315) • Untranslated (63) • Waiting (0) • Fuzzy (0) • Warnings (0)
Network ကွန်ယက်	 Details
2012-03-19 18:10:54 GMT
<a href="https://codex.wordpress.org/Tools_Network_Screen" target="_blank">Documentation on the Network Screen</a> <a href="https://codex.wordpress.org/Tools_Network_Screen" target="_blank">ကွန်ယက်ဖန်သားပြင်ဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်ချက် စာတမ်း</a>	 Details
<a href="https://codex.wordpress.org/Tools_Network_Screen" target="_blank">ကွန်ယက်ဖန်သားပြင်ဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်ချက် စာတမ်း</a>
2015-04-12 22:11:44 GMT
<a href="https://codex.wordpress.org/Create_A_Network" target="_blank">Documentation on CreatingaNetwork</a> <a href="https://codex.wordpress.org/Create_A_Network" target="_blank">ကွန်ယက် ဖန်တီးမှုဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်ချက် စာတမ်း</a>	 Details
<a href="https://codex.wordpress.org/Create_A_Network" target="_blank">ကွန်ယက် ဖန်တီးမှုဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်ချက် စာတမ်း</a>
The choice of subdirectory sites is disabled if this setup is more thanamonth old because of permalink problems with &#8220;/blog/&#8221; from the main site. This disabling will be addressed inafuture version. အဓိကဆိုဒ်မှ &#8220;/blog/&#8221; ဖြင့် ပုံသေလိပ်စာဆိုင်ရာ ပြဿနာကြောင့် ဤသတ်မှတ်ထားမှုသည် တစ်လထက်ပိုကြာလျှင် တည်နေရာညွှန်းခွဲ အသုံးပြုဆိုဒ်များ ရွေးချယ်အသုံးပြုခြင်းကို ပိတ်ပင်ထားပါသည်။ ဒီလိုပိတ်ပင်ထားမှုကို နောင်အနာဂတ် ဗားရှင်းတစ်ခု⁠ခုတွင် ဖြေရှင်းပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။	 Details
အဓိကဆိုဒ်မှ &#8220;/blog/&#8221; ဖြင့် ပုံသေလိပ်စာဆိုင်ရာ ပြဿနာကြောင့် ဤသတ်မှတ်ထားမှုသည် တစ်လထက်ပိုကြာလျှင် တည်နေရာညွှန်းခွဲ အသုံးပြုဆိုဒ်များ ရွေးချယ်အသုံးပြုခြင်းကို ပိတ်ပင်ထားပါသည်။ ဒီလိုပိတ်ပင်ထားမှုကို နောင်အနာဂတ် ဗားရှင်းတစ်ခု⁠ခုတွင် ဖြေရှင်းပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
2014-09-06 08:40:25 GMT
Once you add this code and refresh your browser, multisite should be enabled. This screen, now in the Network Admin navigation menu, will keep an archive of the added code. You can toggle between Network Admin and Site Admin by clicking on the Network Admin or an individual site name under the My Sites dropdown in the Toolbar. ဒီကုဒ်ကို ထည့်သွင်းပြီး သင့်အင်တာနက် ဘရောက်ဇာကို ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ပါက အများသုံးဆိုဒ်ကို ဖွင့်ပြီးဖြစ်ပါမည်။ ယခု ကွန်ယက်စီမံမှု လမ်းပြမီနူးရှိ ဒီဖန်သားပြင်သည် ထည့်သွင်းထားသော ကုဒ်ကို မှတ်တမ်းပြုသိမ်းဆည်းထားပါမည်။ ကွန်ယက်စီမံရန် သို့မဟုတ် ကိရိယာဘားတန်းရှိ ကျွနု်ပ်၏ဆိုဒ်များ ဆွဲချစာရင်းမှ ဆိုဒ်အမည်တစ်ခု⁠ခုပေါ်တွင် ကလစ်နှိပ်ခြင်းဖြင့် ကွန်ယက်စီမံမှုနှင့် ဆိုဒ်စီမံမှုကြားတွင် အပြန်အလှန်ပြောင်းလဲ ဖွင့်ပိတ်မှု ပြုလုပ်နိုင်သည်။	 Details
ဒီကုဒ်ကို ထည့်သွင်းပြီး သင့်အင်တာနက် ဘရောက်ဇာကို ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ပါက အများသုံးဆိုဒ်ကို ဖွင့်ပြီးဖြစ်ပါမည်။ ယခု ကွန်ယက်စီမံမှု လမ်းပြမီနူးရှိ ဒီဖန်သားပြင်သည် ထည့်သွင်းထားသော ကုဒ်ကို မှတ်တမ်းပြုသိမ်းဆည်းထားပါမည်။ ကွန်ယက်စီမံရန် သို့မဟုတ် ကိရိယာဘားတန်းရှိ ကျွနု်ပ်၏ဆိုဒ်များ ဆွဲချစာရင်းမှ ဆိုဒ်အမည်တစ်ခု⁠ခုပေါ်တွင် ကလစ်နှိပ်ခြင်းဖြင့် ကွန်ယက်စီမံမှုနှင့် ဆိုဒ်စီမံမှုကြားတွင် အပြန်အလှန်ပြောင်းလဲ ဖွင့်ပိတ်မှု ပြုလုပ်နိုင်သည်။
Add the designated lines of code to wp-config.php (just before <code>/*...stop editing...*/</code>) and <code>.htaccess</code> (replacing the existing WordPress rules). wp-config.php (<code>/*...stop editing...*/</code> ရှေ့နားတွင်) နှင့် <code>.htaccess</code> (ယခင် ပါရှိပြီးသား WordPress စည်းမဉ်းများကို အစားထိုး၍) သက်ဆိုင်ရာ ကုဒ်များကို ထည့်သွင်းပါ။	 Details
wp-config.php (<code>/*...stop editing...*/</code> ရှေ့နားတွင်) နှင့် <code>.htaccess</code> (ယခင် ပါရှိပြီးသား WordPress စည်းမဉ်းများကို အစားထိုး၍) သက်ဆိုင်ရာ ကုဒ်များကို ထည့်သွင်းပါ။
2014-09-01 10:49:57 GMT
The next screen for Network Setup will give you individually-generated lines of code to add to your wp-config.php and .htaccess files. Make sure the settings of your FTP client make files starting withadot visible, so that you can find .htaccess; you may have to create this file if it really is not there. Make backup copies of those two files. ကွန်ယက်ထည့်သွင်းမှုအတွက် နောက်ဖန်သားပြင်သည် wp-config.php နှင့် .htaccess ဖိုင်တို့တွင် သင်ထည့်သွင်းပေးရမည့် ကုဒ်စာကြောင်းများကို တစ်ခုခြင်းစီ ထုတ်လုပ်ပေးပါမည်။ သင့် FTP သုံးစွဲမှု ပရိုဂရမ်ကို ဖိုင်အမည်တွင် အစက်ဖြင့် စသော ဖိုင်များကို မြင်နိုင်ရန် သေချာစေရန် ဆောင်ရွက်ထားပါ။ ဖိုင်များ ထိုနေရာတွင် မရှိလျှင် ပြုလုပ်ပေးရန်လိုအပ်ပါသည်။ ထိုဖိုင်နှစ်ဖိုင်၏ အရန်သိမ်းဆည်းရန် မိတ္တူကို ပြုလုပ်သိမ်းဆည်းထားပါ။	 Details
ကွန်ယက်ထည့်သွင်းမှုအတွက် နောက်ဖန်သားပြင်သည် wp-config.php နှင့် .htaccess ဖိုင်တို့တွင် သင်ထည့်သွင်းပေးရမည့် ကုဒ်စာကြောင်းများကို တစ်ခုခြင်းစီ ထုတ်လုပ်ပေးပါမည်။ သင့် FTP သုံးစွဲမှု ပရိုဂရမ်ကို ဖိုင်အမည်တွင် အစက်ဖြင့် စသော ဖိုင်များကို မြင်နိုင်ရန် သေချာစေရန် ဆောင်ရွက်ထားပါ။ ဖိုင်များ ထိုနေရာတွင် မရှိလျှင် ပြုလုပ်ပေးရန်လိုအပ်ပါသည်။ ထိုဖိုင်နှစ်ဖိုင်၏ အရန်သိမ်းဆည်းရန် မိတ္တူကို ပြုလုပ်သိမ်းဆည်းထားပါ။
2014-09-01 10:49:58 GMT
Choose subdomains or subdirectories; this can only be switched afterwards by reconfiguring your install. Fill out the network details, and click install. If this does not work, you may have to addawildcard DNS record (for subdomains) or change to another setting in Permalinks (for subdirectories). ဒိုမိန်းခွဲ သို့မဟုတ် တည်နေရာညွှန်းခွဲ ကိုရွေးပါ။ ဒါကို သင့်ထည့်သွင်းမှုအား ပြန်လည် သတ်မှတ်ပြင်ဆင်ခြင်းဖြင့်သာ ပြန်လည် ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ ကွန်ယက် အချက်အလက် အသေးစိတ်ကို ဖြည့်ပါ။ ပြီးလျှင် ထည့်သွင်းပါ ကို ကလစ်နှိပ်ပါ။ ဒါက အလုပ်မဖြစ်ဘူးဆိုလျှင် ခရေပွင့် DNS မှတ်တမ်း (ဒိုမိန်းခွဲများ အတွက်) ထည့်သွင်းပေးရမည် သို့မဟုတ် အမြဲချိတ်ဆက်လိပ်စာ (တည်နေရာညွှန်းခွဲများ) တွင် အခြား သတ်မှတ်ချက်ကို ပြောင်းလဲပေးရပါမည်။	 Details
ဒိုမိန်းခွဲ သို့မဟုတ် တည်နေရာညွှန်းခွဲ ကိုရွေးပါ။ ဒါကို သင့်ထည့်သွင်းမှုအား ပြန်လည် သတ်မှတ်ပြင်ဆင်ခြင်းဖြင့်သာ ပြန်လည် ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ ကွန်ယက် အချက်အလက် အသေးစိတ်ကို ဖြည့်ပါ။ ပြီးလျှင် ထည့်သွင်းပါ ကို ကလစ်နှိပ်ပါ။ ဒါက အလုပ်မဖြစ်ဘူးဆိုလျှင် ခရေပွင့် DNS မှတ်တမ်း (ဒိုမိန်းခွဲများ အတွက်) ထည့်သွင်းပေးရမည် သို့မဟုတ် အမြဲချိတ်ဆက်လိပ်စာ (တည်နေရာညွှန်းခွဲများ) တွင် အခြား သတ်မှတ်ချက်ကို ပြောင်းလဲပေးရပါမည်။
This screen allows you to configureanetwork as having subdomains (<code>site1.example.com</code>) or subdirectories (<code>example.com/site1</code>). Subdomains require wildcard subdomains to be enabled in Apache and DNS records, if your host allows it. ဒီဖန်သားပြင်သည် ဒိုမိန်းခွဲ (<code>site1.example.com</code>) သို့မဟုတ် တည်နေရာ ညွှန်းခွဲ (<code>example.com/site1</code>) အနေဖြင့် ကွန်ယက်ကို သတ်မှတ်ပြင်ဆင်ပေးရန် သင့်ကို ခွင့်ပြုပေးသည်။ သင့်ကို ဝန်ဆောင်မှုပေးထားသူမှ ခွင့်ပြုထားလျှင် ဒိုမိန်းခွဲကို သုံးရန် အပါချီနှင့် DNS မှတ်တမ်းတွင် ခရေပွင့် ဒိုမိန်းခွဲကို ဖွင့်ထားပေးရန် လိုအပ်သည်။ Details
ဒီဖန်သားပြင်သည် ဒိုမိန်းခွဲ (<code>site1.example.com</code>) သို့မဟုတ် တည်နေရာ ညွှန်းခွဲ (<code>example.com/site1</code>) အနေဖြင့် ကွန်ယက်ကို သတ်မှတ်ပြင်ဆင်ပေးရန် သင့်ကို ခွင့်ပြုပေးသည်။ သင့်ကို ဝန်ဆောင်မှုပေးထားသူမှ ခွင့်ပြုထားလျှင် ဒိုမိန်းခွဲကို သုံးရန် အပါချီနှင့် DNS မှတ်တမ်းတွင် ခရေပွင့် ဒိုမိန်းခွဲကို ဖွင့်ထားပေးရန် လိုအပ်သည်။
CreateaNetwork of WordPress Sites WordPress ဆိုဒ်များ၏ ကွန်ယက် ဖန်တီးရန်	 Details
WordPress ဆိုဒ်များ၏ ကွန်ယက် ဖန်တီးရန်
2012-02-03 21:03:04 GMT
The Network creation panel is not for WordPress MU networks. ဒီကွန်ယက် ဖန်တီးမှု ခလုပ်ခုံသည် WordPress MU ကွန်ယက်များအတွက် မဟုတ်ပါ။	 Details
ဒီကွန်ယက် ဖန်တီးမှု ခလုပ်ခုံသည် WordPress MU ကွန်ယက်များအတွက် မဟုတ်ပါ။
Users deleted. သုံးသူများကို ဖျက်ပြီး။	 Details
Users removed from spam. သုံးသူများကို နှောက်ယှက်သူစာရင်းမှ ဖျက်ပြီး။	 Details
သုံးသူများကို နှောက်ယှက်သူစာရင်းမှ ဖျက်ပြီး။
Users marked as spam. သုံးသူများကို နှောက်ယှက်သူအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီး	 Details